Fifidianana Filoham-pirenena Etazonia: Ny Teny Misy S… sy Eoropa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2018 12:01 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratr anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2008)
Ny famelezana farany tamin'ny fanentanana nataon'i McCain dia toa mihodina manodidina an'io teny mandratra manomboka amin'ny teny “S” io – sahala amin'ny ao anatin'ny hoe “Obama dia Sosialista”. Matetika izy io arahin'ny teny tsy azo ialàna E (sahala amin'ny hoe “Eoropa”), tahaka izay nolazain'i McCain izy tenany ihany: “Fara faharatsiny, ao Eoropa, ireo sosialista mpitondra izay tena mankasitraka ny mpifanandrina amiko dia mampiseho ampahatsorana an'ireo tanjony.”
Inona no eritreretin'ireo Eoropeana amin'ireo fanehoankevitra farany nataon'ilay Kandidà Repoblikana amin'ny fifidianana filoham-pirenena?
Guillemette Faure, vehivavy blaogera frantsay iray, teo amin'ny rue89, faly fa tsy gaga:
Io no teny mandratra farany tamin'ny fampielezankevitra. “Fara faharatsiny, ao Eoropa, ireo sosialista mpitondra izay tena mankasitraka ny mpifanandrina amiko dia mampiseho ampahatsorana an'ireo tanjony”, hoy ny filazan'i John McCain tamin'ny famoriambahoaka. Mariho ireo famelezana roa indray nitranga: Obama sosialista + Obama tohanan'ny avy any ivelany […] Nahita fiarovantena i Obama: “niantso i Warren Buffet (ilay mpanapitrisa) mba hampandany ahy, Colin Powell ihany koa ary i John McCain mihevitra fa manaraka ny sosialisma aho”.
Manazava i Alex Engwete (Etiopia) fa matetika mitranga ao Etazonia ny fifangaroana misy eo amin'ny kaominisma sy ny sosialisma:
Maro amin'ny olona eto no mino fa mitovy lanja ny sosialisma sy ny rafitra kaominista. Omaly, tao anaty trano etiopiana iray fisotroana kafé ao amin'ny faritra misy ahy ao Washington DC, valaka aho nanazava tamin'ireo mpividy vitsivitsy ireto antony manaraka ireto (tsy dia nahomby mazava ho azy): 1) tsy sosialista i Sarkozy, sady tsy kaominista ihany koa ; 2) mametraka ny fakàna ireo fitaovana famokarana ho lasa fananan'ny fanjakana ny kaominisma
Nathalie Mattheiem, vehivavy blaogera eo amin'ny americana, mihevitra fa ny fitiavana izay vao avy foy ho an'ny teny misy S dia marika iray fa ny teny misy T (toy ny “Terorista – mpampihorohoro”) mbola tsy tena mahazo laka ary mamintina izy fa ny teny misy S mety tsy hitondra zavatra tsara ho an'i McCain ihany koa :
marika iray, angamba hoe tsy nitondra izay vokatra nandrandraina taminy hamelezana an'i Barack Obama ny fiampangana azy ho “nifankazatra tamin'ny mpampihorohoro” ? […] Ao anatin'ny krizy ara-toekarena, ho tena hihoronkoditra ve ireo Amerikana (izay manodidina ny 45 000 dolara ny salan'ny vola miditra amin'ny ankapobeny) noho ny sosokevitra izay mikendry ny hampidinana ny hetra ho an'ny ankamaroan'izy ireo, raha iverenana ireo taha nandritra ireo taona nitondran'i Clinton , fampandoavana hetra 1,5% an'ireo tokantrano izay manambara ny vola miditra aminy ho mihoatra ny ampahefatra tapitrisa dolara?
Manamarika lavidavitra kokoa i Mattheiem:
“ny kandidà iray izay afaka “mihanihany” fa ny harena dia manomboka amin'ny 5 tapitrisa dolara dia mety tsy hanana fijery mazava tsara momba an'i Amerika “antonontonony”.
Claire, izay manao blaogy avy any Alemaina eo amin'ny cheeseburger and sauerkraut, maniry ny hanazava ny angano sosialisma ao Eoropa (teny anglisy):
I Alemaina, mifanohitra amin'izay toa hinoan'ny maro, dia TSY firenena sosialista. Tena tsy hitako mihitsy hoe nahoana io angano io no mitohy misy foana.
Tsy misy ny fandrakofana ara-pahasalamana iraisan'ny rehetra ao Alemaina. Didian'ny Fanjakana ho tsy maintsy atao ny antoka-ara-pahasalamana, saingy tsy tohanany ara-bola izany. Tsy aloan'ny Fanjakana amiko ny fiantohana ara-pahasalamana, ahy, na ny an'ny rafozako, na ny an'ireo namako, sy ny sisa… Raha ny marina, mandoa 50% amin'ny fiantohana ara-pahasalamako aho ary ny mpampiasa ahy no mandoa ny 50%. Azoko omena ho porofo ny taratasy fandraisako karama. Ny fiantohana ara-pahasalamana ho an'ireo tsy miasa ihany no tohanan'ny Fanjakana ara-bola.
Tsy tompon'ireo fitaovana famokarana ao Alemaina ny Fanjakana. Toe karena iray mifototra amin'ny fifanakalozana ara-barotra malalaka i Alemaina.
Misy ireo fitsipika sasantsasany, tahaka izay mikasika an'ireo banky sy ny angovo. Mba hiantohana fa tsy ho voasoloky ireo mpanjifa.
Arovan'ny Lalàmpanorenana Alemàna ireo fahalalahana maneho hevitra sy ny fanaovana gazety.
Ho famaranana, manazava i Alexandre Vatimbella tao anatin'ny Le centrisme (Frantsa), fa na i McCain na i Obama dia samy tsy hiditra velively ao anatin'ny rafitra misy an'ireo antoko ankavia na ankavanana ao Frantsa:
Na izany aza, na dia teo aza ny vokatry ny fifanenjanana sy ireo levilevy teny an-tsehatra’, John McCain ary, indrindra indrindra, Barack Obama, dia samy tena centristes avokoa […] ao Frantsa, tsy hahazo karatra avy amin'ny Antoko sosialista i Barack Obama (izay miahiahy azy avokoa ireo tomponandraikitra ao, toa an'ireo kandidà demokraty rehetra tsy dia ankavia loatra raha ny hevitr'izy ireo, afa-tsy i George McGovern tamin'ny taona 1972, tsy isalasalàna, izay voafafan'i Richard Nixon), na amin'ny UMP (izay, ireo tomponandraikitra ao dia manana fironana mahatezitra manohana an'ireo Demokraty kokoa fa tsy ireo Repoblikana, izay mazava tsara anefa fa akaiky kokoa ny hevitra politikan'izy ireo).